Onye na-agbanwe ego maka kọmputa na ekwentị mkpanaaka | Akụkọ akụrụngwa
Onye na-agbanwe ego nwere ike ịba uru nye onye ọ bụla na oge ụfọdụ, ọ bụrụ na anyị bụ otu n'ime ndị ahụ na-eleta ụlọ ahịa dị iche iche n'ịntanetị iji nweta ụdị ngwaahịa. Ebe obu na ekeresimesi di ezigbo nso, onodu a kariri nke oma na mba di iche-iche n’uwa, ebe ileta udiri udiri anya a ga-eme anyi ka anyi tinye ego di iche-iche, nke anyi nwere ike ghara imata n’ozuzu ha.
Ebe ọ bụ na euro, dollar, paụnd sterling na ego ole na ole ndị ọzọ na-adịgasị iche iche kwa ụbọchị (na mgbe ụfọdụ kwa nkeji ọ bụla), ọ bụ ihe na-agaghị ekwe omume ịmara ọnụego mgbanwe n'etiti onye ọ bụla n'ime ha, ọ bụ ya mere ụfọdụ ụdị onye ntụgharị ọtụtụ mkpụrụ ego; n'isiokwu a anyị ga-ekwu uzo ole na ole dika ichikota, ebe a raara ụfọdụ nye gam akporo ekwentị mkpanaaka na kọmputa ndị ọzọ anya.
1 Otutu ngbanwe ego maka komputa nkeonwe
2 Otutu mgbanwe ego maka gam akporo
Otutu ngbanwe ego maka komputa nkeonwe
Ọ bụ ụzọ isi kwuo ya, ebe ọ bụ n'eziokwu ihe anyị ga-akwado na akụkụ mbụ nke isiokwu a maka usoro ntụgharị ọtụtụ mkpụrụ ego, ọ bụ na ngwa weebụ yana ngwa; na nke mbụ, a pụrụ iji ngwa weebụ ọ bụla na ụdị kọmputa ọ bụla, naanị ịchọrọ ezigbo ihe nchọgharị Internetntanetị, otu ihe dika nwere ike ịbụ Google, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ na-amasị gị. Usoro ị ga - agbaso bụ ndị a:
Anyị na-abanye na weebụ ngwa «Ego Ihe Ntụgharị», a njikọ na ị ga-ahụ na njedebe nke isiokwu.
Anyị ga-ahụ interface enyi na enyi nke dị mfe ịmata site na onye ọrụ.
Na nhọrọ «Site»Anyị ga-ahazi ụdị ego nke anyị maara uru ya.
Na nhọrọ «Kwupụta»Kama anyị ga-etinye ụdị ego nke anyị chọrọ ịgbanwe.
Na "Ọnụ»Kama nke ahụ, anyị ga-etinye uru nke azụmaahịa anyị chọrọ nyocha.
N'otu uzo nke ngwa weebụ anyị nwere ike ịhụ ụfọdụ «Akụ abụọ»Verticals, nke ga - enyere anyị aka ịtụgharị ụdị ego« isi mmalite-aga ».
N'ịbụ ngwa weebụ, a ga-egbu atụmatụ ahụ anyị kwuru banyere ụdị ikpo okwu ọ bụla, ma ọ bụ Windows, Mac ma ọ bụ Linux. Ihe ndị ọzọ anyị ga - ekwupụta bụ naanị na Windows 7, sistemụ arụmọrụ Microsoft nke bịara iji jikọta Ngwa ndị a ma ama na ugbu a, ihe ndị a adịghị na Windows 8. Iji nwee ike iji mmewere a, naanị:
Anyị kwesịrị pịa na nri bọtịnụ nke anyị òké na desktọọpụ.
Site na nhọrọ ndị egosipụtara, anyị na-ahọrọ nke na-ekwu Ngwa.
A ọhụrụ window ga-egosi na a ole na ole Ngwa, nke anyị ga-ahọrọ onye na-ekwu "Ego".
Ngwaọrụ a ga-arụ ọrụ ọkacha mma n'akụkụ aka nri nke desktọọpụ Windows anyị onye ọrụ iji hazie ụdị isi mmalite na ego ebe; a ga - emelite ụkpụrụ ndị egosiri n'ebe ahụ na ezigbo oge, nke a bụ nnukwu uru na ịdị mma maka ndị bi n'ụwa a nke ego.
Otutu mgbanwe ego maka gam akporo
N'agbanyeghị ma ị nwere ekwentị mkpanaaka ma ọ bụ mbadamba gam akporo, na ụlọ ahịa Google play ị nwere ike inweta nke a Ntụgharị ọtụtụ mkpụrụ ego, enwere 2 uzo ozo di nma ka anabata.
The interface nke ọ bụla n'ime ngwa ndị a bụ ihe mara mma, ebe enwere nhọrọ iji tinye ego isi mmalite yana ego na-aga.
Ihe onyonyo ahu nke anyi debere n’elu na-ezo aka na otu n’ime ngwa gam akporo ndi a, nke nwere ike buru ihe zuru oke n’ihi inye obere tray ozo, ebe enwere onu ogugu nke ichoro di mfe tinye uru ị chọrọ ịchọpụta na ego ọzọ. N'ọnọdụ ọ bụla, ihe ọ bụla gam akporo ngwa ị kpebiri ịwụnye na ngwaọrụ mkpanaka gị, enwere ike ịsị na ndị ọzọ a 2 nwere ike igboju mkpa ọ bụla ịmara (ihe ọmụma) banyere ihe na-eme n'ụwa na nke ọ bụla n'ime ego ndị a.
Ozi ndị ọzọ - Gbaa ụdị ngwa dị iche iche na Google Chrome
Weebụsaịtị - Ngwa weebụ, Mgbako ego, Onye na-agbanwe ego
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » Nweta ọtụtụ ndị na-agbanwe ego maka ngwaọrụ dị iche iche